Ingqungquthela ye-StreamGeek ibhekiswe kwiDolophu yaseNew York | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » Ingqungquthela ye-StreamGeek ibhekiswa kwiSixeko saseNew York
NguPaul Richards, iGosa loSasazo eliyiNtloko, iiSourceGeeks
Nge-Novemba, i-StreamGeeks iya kubamba ingqungquthela yokuqala yohlobo lwayo yokusasaza bukhoma kwi-NYC. Olu suku olupheleleyo lwemfundo yokusasaza bukhoma iya kuhlanganisa iingqondo eziphambili kwimveliso yevidiyo kunye nomzi mveliso wentengiso ukuxoxa ngekamva losasazo. Kodwa linda, ngooStrowsGeeks? Yintoni le heck abayaziyo aba bantu malunga nokusasazwa bukhoma?
Ukuqala kwam ukusasaza bukhoma kwi-2015, ndenze phantse yonke impazamo. Emva kwexesha lonyaka, ukuvelisa imifudlana eqhelekileyo kwi-YouTube, inkampani yethu yaqala ukubona ukuphakama okuphezulu kwintengiso kunye nokubonisa i-Intanethi. Sebenzisa yethu I-PTZOptics iikhamera zokusasaza bukhoma, ndafumana igroove, kwaye ndaqala ukwakha abaphulaphuli abazinikeleyo. Akuzange kube thuba lide ndazisa umnini-mkhosi kwaye ekugqibeleni waba ngumlimi osisigxina. Ngelixa iFacebook Live isungulwe kwi2016, iqela lethu kunye nomjelo wethu ophilayo uqalile ukufumana ukuthengiswa ngakumbi ngababukeli kwihlabathi liphela. Sasisasaza kwiYouTube nakuFacebook rhoqo ngoLwesihlanu. Imilambo esiyivelisileyo ibiyinyani, kwaye sazibandakanya nabaphulaphuli bethu ngokubabonisa ukuba imisinga ebanzi ayisiyonto ingenasiphoso. Ngelixa ixesha lihamba, saye siziingcali ngenene kwicandelo kwaye sinokwabelana ngale lwazi kunye nokukhula kwethu okulandelayo. Ngeli xesha, ndaye ndagqiba kwelokuba ndibhale incwadi “ Ukusasazwa okubukhoma yintengiso ye-Smart. ”Yayingumphetho womsebenzi esiwenzileyo, efanekisela uhambo lwethu ngendlela ebonisa abanye, nabo, abanokunxibelelana nabaphulaphuli kwaye bakhe uphawu lweevidiyo zabo. Sithathe abafundi ngokuseta izixhobo zethu zokusasaza bukhoma kuba sifuna ngokwenene ukunika olu lwazi kunye nobuchule kwabanye. Sincede amashishini asekuhlaleni eChester County, ePa., Ukuvelisa imilambo yabo yokuqala yokuphila. Sivelise kwaye sabamba ngokubambisana umjelo obanzi wokunceda imali yendawo engenzi nzuzo ekunyuseni imali kumaxhoba olwwaphulo-mthetho olunobundlobongela, sivelise nomjelo obanzi wesitishi sasekhaya, sikanomathotholo. La mava asikhokelele kumaxesha afundekayo kubaphulaphuli bethu. Sababelana ngako konke nabo, ukusuka kumdlalo wangaphambi komboniso nasemva kwemiboniso bhanyabhanya yokumisela iikhamera zethu ukuthumela imiboniso kwisitudiyo sethu sePodcast apho sasiza kwenza yonke into esiyenzileyo. Inkqubo yaba yinto yokuvelisa ngokupheleleyo kwaye yavumela abaphulaphuli bethu ukuba babe yinxalenye yenyathelo ngalinye.
Oku kusikhokelele kumbono wokudala ingqungquthela engaphakathi emntwini. Ndikhangele into encinci ukusuka kwimiboniso yorhwebo eqhelekileyo, ngamathuba abo babekhona ukwenza unxibelelwano lwenene kwaye bafumane ukuqonda okuxabisekileyo. Ukusuka koku, i Ingqungquthela ye-StreamGeeks wazalwa.
NgoNovemba.8 kwi Iphupha leDowntown e-Chelsea, iqela lam kunye nam ndibamba usuku olupheleleyo lwemfundo yokusasaza bukhoma. Ukusuka kwi-8 kusasa ukuya kwi-5 pm, ababekho baya kuba nakho ukunxibelelana bukhoma
Iingcali zokusasaza kunye neeamateurs ezijonge ukongeza umjelo obanzi kumashishini abo. Ndiyazingca ukutsho ukuba iya kuba yinkomfa yokuqala yohlobo lwayo elunxwemeni olusempuma, kwaye sizimisele ukuyenza loo nto ingalibalekiyo.
Isithethi esiphambili seSummGeeks Summit iya kuba nguGeoffrey Colon, oyintloko weMicrosoft Advertising Brand Studio kunye nombhali "wentengiso ephazamisayo." Uya kugxila kwintetho yakhe kumandla okusasaza bukhoma kunye nefuthe lakhe kubuchule beempawu, ipodcasting, ishishini lezemidlalo, ishishini lomculo eliphilayo, kunye nemidlalo. UChris Packard uzakuthetha ngeqonga losasazo lwamva, I-LinkedIn Live. Zombini ziya kudityaniswa nee-CEO, iinkokeli zeengcinga kunye neengcali kolu shishino.
Ukongeza kwiworkshops kunye neephaneli, kuya kubakho ulwamkelo olukhethekileyo lwe-VIP ngoLwesine. Isazi sokusasaza esijikeleze isiXeko saseNew York esaseka iUrbanist siza kunika ukhenketho lwesithili sokupaka inyama, lonke eli xesha usasaza bukhoma!
Ke ukuba ungaloba usuku lokuphuma kwimfundo yokusasaza bukhoma kunye nenethiwekhi, dibana nathi kwiDoentown Nov. 8. Amaxabiso eentsuku zosuku lonke amatikiti yi- $ 295 kuphela. Isidlo sasemini siya kufakwa. Fumana amatikiti akho kamsinya kuba umcimbi ubekiwe kwi-250 ababekho. Amatikiti abonakalayo ayakhona, kwaye amatikiti abalulekileyo e-premium aya kukuvumela ukuba ufikelele kurekhodwe kuyo yonke indibano.
Ndiyathemba ukukubona kwi-Apple Enkulu, naku!
UPaul liGosa eliyiNtloko lokuSasazwa kwiiStrigGeeks kunye nombhali "UkuSasazwa ngokuBukhoma yiNtengiso ye-Smart." URichards ufundisa ngaphezulu kwabafundi be-20,000 kwi-UDEMY kwimveliso yevidiyo ebukhoma, ukusasazwa kweselula, nokunye okuninzi. I-Richards ibambe i-NAB esemthethweni (Umbutho weSizwe woSasazo) umboniso eLas Vegas kwaye iyaqhubeka nokuba yinkokeli yokucinga kushishino.
i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa ingxolo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw Imikhonto kunye neentolo I-Ultra HD Forum 2019-10-01
Previous: Inkqubo yeRectrosonics venue2 Receiver System ngoku iyafumaneka kwi941-960 MHz band
next: Iindidi zoNyulo loTyando lweMbasa ye-2019 ye-HPA Yabhengezwa